भवन डिजाइन र AutoCAD सफ्टवेयर पोर्टल
द्रुत उत्तर: तपाइँ कसरी Revit मोडेलहरूमा फर्नीचर थप्नुहुन्छ?
श्रेणी: अन्य 0
म कसरी Revit 2022 मा फर्नीचर थप्न सक्छु? घुसाउनुहोस् ट्याबमा, ब्राउजर लोड गर्न Autodesk परिवार लोड गर्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। ब्राउजरमा ब्राउज ट्री प्रयोग गर्नुहोस्...
AutoCAD Mac मा तह गुण कहाँ छ?
म कसरी AutoCAD मा तह गुणहरू खोल्न सक्छु? CAD रेखाचित्रमा दायाँ-क्लिक गर्नुहोस्, CAD रेखाचित्र वस्तुमा पोइन्ट गर्नुहोस्, र त्यसपछि गुणहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। तह ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस्। चयन गर्नुहोस्…
द्रुत उत्तर: CAD CAM मा COM को पूरा रूप के हो?
तलका मध्ये CAD को पूरा रुप कुन हो? कम्प्युटर-एडेड डिजाइन (CAD) कम्प्युटरहरू (वा कार्यस्थानहरू) को निर्माण, परिमार्जन, विश्लेषण, वा…
तपाइँ कसरी ड्राफ्टसाइटमा वस्तुहरू पङ्क्तिबद्ध गर्नुहुन्छ?
तपाइँ कसरी वस्तु पङ्क्तिबद्ध गर्नुहुन्छ? कुनै वस्तुलाई अन्य वस्तुहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस् Shift थिचिराख्नुहोस्, तपाईंले पङ्क्तिबद्ध गर्न चाहनुभएको वस्तुहरूमा क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि…
म कसरी SolidWorks Recenter बनाउने?
मैले Solidworks मा रिसेस्टरलाई कसरी हेर्छु? बायाँ वा दायाँ तीर कुञ्जीहरू थिच्नुहोस्। दृश्य उपकरणहरूमा तीर कुञ्जीहरूको लागि निर्दिष्ट वृद्धि मान अनुसार चल्छ...
प्रश्न: तपाईं सिभिल 3d मा लाइन तालिका कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ?
तपाईं सिभिल 3d मा एक पङ्क्तिबद्ध तालिका कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ? पङ्क्तिबद्धता तालिकाहरू थप्दै एनोटेट ट्याब लेबलहरू र तालिकाहरू प्यानल थप्नुहोस् तालिकाहरू मेनु पङ्क्तिबद्धता थप्नुहोस् लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। मा…
के Internet Explorer 11 ले SVG लाई समर्थन गर्छ?
के SVG इन्टरनेट एक्सप्लोररमा काम गर्छ? SVG (स्केलेबल भेक्टर ग्राफिक्स) आधिकारिक रूपमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर सहित सबै मुख्य वेब ब्राउजरहरूद्वारा समर्थित छ। समर्थन एक विस्तृत विविधता मा फैलिएको छ ...
STL कुन देशको लागि खडा छ?
STL* को लागि के खडा हुन्छ? STL। STL 3D प्रणालीहरू द्वारा बनाईएको स्टेरियोलिथोग्राफी CAD सफ्टवेयरको मूल ढाँचा हो। STL लाई मानकको रूपमा पनि चिनिन्छ ...
तपाईं SOLIDWORKS मा सामूहिक गुणहरू कसरी देखाउनुहुन्छ?
तपाईं मास मा गुण कसरी देखाउनुहुन्छ? तपाईले गणना गरिएको द्रव्यमान गुणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ।…मास गुणहरू प्रदर्शन गर्न: मूल्याङ्कन गर्न वस्तुहरू (घटकहरू वा ठोस निकायहरू) चयन गर्नुहोस्। … क्लिक गर्नुहोस्...
तपाईंले सोध्नुभयो: के तपाईं Solidwork मा DXF आयात गर्न सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ DXF लाई SOLIDWORKS भागमा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ? dxf)। फाइलमा ब्राउज गर्नुहोस्, त्यसपछि खोल्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्। मोडेल तुरुन्तै SOLIDWORKS भागमा रूपान्तरण हुन्छ, वा…
12... 7,795 अर्को
नमस्ते! मेरो नाम जोन हो। म एक इन्जिनियर र डिजाइनर हुँ। म मेरो अनुभव र कुनै पनि निर्माण सुरु गर्दा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू साझा गर्न चाहन्छु।
मेरो फाइल ANSI वा UTF 8 हो भने मलाई कसरी थाहा हुन्छ?
म कसरी AutoCAD मा रेखाचित्र तल मापन गर्छु?
तपाईंले सोध्नुभयो: गैंडाको अर्थ किन पैसा हो?
म कसरी Revit मा समूह सम्पादन मोडबाट बाहिर निस्कन सक्छु?
म कसरी AutoCAD मा योजना ट्रेस गर्छु?
तपाइँको प्रश्न: तपाइँ Solidworks मा एक दृश्य कसरी बचत गर्नुहुन्छ?
तपाईको प्रश्न: के सिंहले गैँडाको पप खान्छन्?
अधिकार धारकहरूलाई ध्यान दिनुहोस्! सबै सामग्रीहरू सूचना र शैक्षिक उद्देश्यका लागि साइटमा कडाईका साथ पोस्ट गरिएका छन्! यदि तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि सामग्रीको पोस्टिङले तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्दछ, सम्पर्क फारम मार्फत हामीलाई सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस् र तपाइँको सामग्री हटाइनेछ!